Momba anay - Suzhou Wujiang Shenzhou Bimetallic Cable Co., Ltd.
Shenzhou no voalohany nahazo alalana kalitaon'ny fanondranana ho an'ny tariby alimo vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina tamin'ny 2008, ary tamin'ny taona 2010 no nahazo ny orinasa teknolojia avo lenta Titre any amin'ny faritanin'i Jiangsu sy ny faritany siansa sy teknolojia tsy miankina an'ny Faritany Jiangsu. Ny vokatra dia aondrana any Taiwan Hong Kong, Azia Afovoany Atsinanana atsinanana, ary Eropa sy Etazonia ary firenena hafa miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra azo antoka ary ny vokatra azo avy amin'ny famokarana ary ny fahaizan'ny varotra.
Ary tamin'ny 2014 aorian'ny fanamarinana vokatra mihoatra ny iray taona sy tapany, Shenzhou dia nahazo fanamarinana UL ho an'ny vokatra tariby CCA enamel, tariby aluminium ary tariby varahina. Amin'izany ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny vokatray ho an'ny tsena eropeana sy amerikanina amin'izao fotoana izao
Hatreto i SHENZHOU dia niitatra tamin'ny toby famokarana tariby telo misy enamel sy ozinina milina enamel iray miaraka amin'ny fivoahan'ny tariby CCA mihombo 2000 taonina isam-bolana. SHEHOZU dia nanjary mpanamboatra tariby CCA enameled ao Shina misy tsipika famokarana enina 54.
Taorian'ny fampandrosoana 16 taona, ny vokatra tariby misy enamel an'ny SHENZHOU dia nampiharina tamin'ny indostria isan-karazany, toy ny motera elektrika (ao anatin'izany ny fipetrahana rivotra, vata fampangatsiahana, milina fanasan-damba, fitaovana elektrika, motera indostrialy), mpanova lehibe sy madinidinika, coil inductance elektromagnetika, fiara sy fiara elektrika motera, charger batterie, coil amin'ny feo, ballast, relay ary karazana coil hafa.
Fanaraha-maso kalitao henjana sy fitoniana maharitra amin'ny vokatra manome, manohana ny fampandrosoana maharitra ny orinasa SHENZHOU.